Spare Zvikamu magiya shaft mutengo mhando magiya spur giya mutengesi
Spare Part gear shaft, mhando dze spur gear supporter
Magiya & shafts Spare Zvikamu
Gearbox OEM Kutsiva Spare Zvikamu.
Isu tinopa maGear & shaft parameter uye zvinhu zvekushandisa.
Wona Zvigadzirwa zvedu
Isu tinopa yakakwira mhando, low low gearbox zvikamu senge magiya uye shafts.
Rudzi rwese rwemaindasitiri gearbox masokisi magiya uye shafini kusanganisira yeWorm gear ndiyo imwe yemhando yechigadzirwa gear. Bevel Gears inoshandiswa mune zvinoshandiswa. Spur magiya ndiwo ari nyore kuona zvakajairika kujairika magiya.Premium arborist zvekushandisa uye nemuti kukwira magiya. Helical magiya ndeimwe mhando yemasirinda egiya ane akasarudzika mazino ekutsvedza. Gearbox Shafts ndeye shaft yezuva, shaft yepuraneti, hollow shaft, uye yakaderera uye yakakwirira yekumhanyisa shaft. tsika shafts zvichienderana neyako dhizaini uye zvekushandisa zvinodiwa.
Iyo giya shaft pamwe neiyo gearing profiles
Iyo shaft inotsvedzerera uye haina ngura; mhando yacho yakanaka uye iyo modhi izere; Hupenyu husina kupfeka hwegiya shaft hwakareba.Giya kana cogwheel chinhu chinotenderera muchina chikamu chine mazino akachekwa. Yake yakangwara-yakananga-giya bhokisi uye kurongeka kwemamota. Iyo gearmotor ndeye-mune-imwe mubatanidzwa wemagetsi mota uye giya bhokisi. Pinion igiya rakatenderera. Gears shandai vaviri vaviri kuendesa nekugadzirisa kutenderera uye torque yakakura kwazvo kutapurirana. Sogears inopa yakazara yakazara giya mhinduro kune vashandisi pasi rese. Isu tiri mutungamiri mukuvandudza uye kugadzirwa kwemagiya ese, kusanganisira giya uye powertrain dhizaini software, magiya akasungirirwa muchina, metering masystem, otomatiki mhinduro, zvine chekuita nemidziyo uye epurasitiki magiya.
Zvipenga zvidimbu zvegiya mabhokisi
Isu tinosheedzera marudzi ese emisika yemagiya, kubva kumusoro-chaiko giya maturusi emagetsi uye zvekushandisa pakurapa, kuenda kumotokari nedzimotokari dzinofambiswa, kumahara makuru emagetsi enjini uye emuchina wemigodhi.
Isu tiri nyanzvi dzakakumikidzwa mukugadzirwa kweakanyanya ekujeka magiya technology zvigadzirwa.
Sogears inoenderera bhizinesi modhi yakabatanidza nhengo dzese dzeSogears kuvepo kwepasirese. Isu tinotora nzira inoshanda kwazvo kudzikisira kurasikirwa uye nekushandisa simba kwakaringana kusanganisira chengetedzo yechigadzirwa uye maitiro. Isu tinogadzirisa rese basa uye kugadzirwa, tinovadzora uye tinoramba tichivandudza kushanda kwavo. Ese makuru makuru epasi rese zvivakwa zve ISO. Zvemapuraneti gearing ndeye giya system inosanganisira imwe kana yakawanda yekunze. Chechishanu Gear inyaya yeBritish motoring terevhizheni magazini.Tinopa huwandu hwakazara hwemhando yepamusoro yekusimudza michina kuti ienderane nezvose zvinodiwa. Tsananguro yePinion Gear. Iine akateedzana emuchina maturusi akadai seGerman Liebherr maturusi emuchina, maGerman EMAG maturusi emuchina, Japan Mitsubishi michina maturusi, Japan Mori maturusi maturusi, uye Japan Longze muchina maturusi.
Kana iwe uine zvigadzirwa zvako zvaunofarira, uya ubatane nesu! Isu takagadzirira uye tinotarisira kubatana kwedu. Isu tinotora mhando sekushandisa kwedu uye mutengo wakaderera ndiko kutendeseka. Kana iwe uine chero mibvunzo, iwe unogona kutibata nesu, tichafara kukubatsira!